K: သံတူကြောင်းကွဲ( အပြီး)
“ ဒယ်ဒီ က ၊ ခု ပုသိမ်မှာ ခရိုင် ဆရာဝန်ကြီးလေ၊ မာမီ နဲ့ မောင်လေး ကလည်း ပုသိမ်မှာပဲ၊ အဲဒါ ကြောင့်၊ ချော လည်း ပုသိမ် ကောလိပ် ရောက်သွားတာ.. first year ထဲက၊ ရန်ကုန် မှာပဲ တက်ဖို့ ကို၊ ဒယ်ဒီက စိတ်မချဘူး၊ အဒေါ်တွေ အလိုလိုက်တော့ လွတ်မှာ စိုးလို့ တဲ့.. ဘာရမလဲ.. အောနပ်စ် ၀င်အောင် လုပ်ပြစ်လိုက်တာ.. ခု တော့ အဆောင် ရတော့ အဆင်ပြေ သွားတာ..ဒါတောင် အန်တီ တို့က အိမ်မှာပဲ နေရမယ်.. လုပ်နေတာ.. မနေနိုင် ပေါင်..ဘွားဘွား က တမျိုး..အဒေါ်တွေ ကလဲ အကြီးက တမျိုး..အငယ်က တမျိုး နဲ့.. အဲဒါ ကြောင့် ..ကိုကို လဲ အမေရိက ထွက် သွားတာ.. အမလေး...ဒါတောင် စည်းကမ်း တွေ နဲ့.. အပတ်တိုင်း အိမ်ပြန် အိပ်ရမယ် တဲ့.. နှစ်ရက် တခါ ဖုန်းဆက် ရမယ် တဲ့..”
ပန်းနုရောင် လက်သည်း ချွန်ချွန်လေး တွေ ကို တံစဉ်း သေးသေး လေး နဲ့ တယုတယ တိုက်ရင်း..ညည်းကြွားလေး ကြွား နေသော ပြောင်လက် ချောမွတ် နေ တဲ့ မျက်နှာလေး ကို မေဦး စိတ်ဝင် တစား ငေးကြည့် နေမိသည်။
“ ကဲ.. မေဦး အကြောင်း ပြောဦး.. စပ်စုတာ မဟုတ်ဘူး နော်..တခန်းထဲ နေမဲ့ ပါတနာ တွေပဲ.. နဲနဲ တော့ သိထားမှ ပေါ့ နော်..မဟုတ်လား...”
“ အဟင်း..ဟုတ်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့..မေဦး အကြောင်းက ဘာမှ စိတ်ဝင်စား စရာ မရှိပါဘူး..မိဘ တွေက..ကျောင်းဆရာ..ဆရာမ တွေ.. မောင်နှမ က သုံးယောက် ..မေဦး..အကြီးဆုံး...”
“ ဟာ.. ကောင်းလိုက်တာ.. အဲဒါကြောင့်..မေဦးကို ကြည့်ရတာ လိမ်လိမ် မာမာလေး ဖြစ်နေတာ.. ဟုတ်တယ်.. ချောတော့..မေဦး ကို မြင်တာနဲ့ ခင်တယ်.. တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် နော်..နာမည်တွေ ကလဲ..ခပ်ဆင်ဆင်.. တကယ်ပြောတာ.. မေဦးက သိပ်ချစ်စရာ ကောင်း တာပဲ..ဆံပင် အရှည်ကြီး နဲ့.. မျက်ခုံး ထူထူ နဲ့.. မြှောက် နေတာ မဟုတ်ဘူးနော်..”
“ ကဲ..ကဲ.. တော်ပါတော့ ချောရယ်.. မနက်ကျ အစောကြီး ထရမယ် ဆို.. ၁၀ နာရီ တောင် ကျော်နေပြီ...”
“ အို..ဟုတ်သား..မနက်ကျရင်..regular class တခု ရှိ သေးတယ်.. တော်ကြာ..မတက်ရင်..တီချယ်ကြီးက.. မာမီ့ ဆီ စာလှမ်း ရေး ပြီး တိုင် နေဦးမယ်.. ကျေးဇူး..မေဦးရေ.. ခုပဲ အိပ်မယ်..ဂွတ်ဒ် နိုက်..”
ပန်းနုရောင် ဇာခြင်ထောင် လေး ထဲက..လက်ကလေး ထုတ်ပြီး.. အပြာရောင် မီးအုပ်ဆောင်း လှလှ လေး ရဲ့ ခလုတ်ကို ပိတ်လိုက် ချိန် မှာ..မေဦး လည်း ..နေရှင်နယ် မီးလုံးလေး ရဲ့ ခလုတ် ကို ပိတ်ရင်း ခြင်ထောင်ထဲ ၀င်လိုက် တော့ သည်။ အိပ်လို့ ကတော့ မပျော်.. အတွေး တွေ ထဲမှာ အိမ်ကို သတိရလိုက်.. အခန်းဖော် အကြောင်း တွေးလိုက်.. ။
သူ့ ပုံစံ က.. အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင် လွတ်လပ် နေတဲ့ ပုံစံ မျိုး.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..ကောင်းပြစ် လိုက်တာပဲ.. ပျော်ပြစ် လိုက် တာပဲ.. အပြောလေး တခု ကတော့ ဖြင့်.. ရန်ကုန်သူ ပီသ ပါပေသည်။
ဒါပေမဲ့..တခါ တလေ ကျ.. တကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသား ပြောနေပုံ မျိုး.. စိတ်ရင်း ကတော့..ကောင်း မဲ့ ပုံပင်.. အေးလေ.. ငါတို့က ကြွားတယ် လို့ ထင်ပေမဲ့.. သူ့ အတွက် က.. အမှန် တကယ်..သမရိုးကျ အကြောင်းတွေ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေ မှာပေါ့...
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..သူ- မမျှော်လင့်ဆုံး..မဆုံခြင်ဆုံး လူစားမျိုး နဲ့ မှ..အခန်းဖော် လာ ဖြစ် နေတာ..ကံကိုက..ဆိုးလွန်း ပါသည်။ အရိပ် အခြေ တော့ ကြည့် ပေါင်းမှ ဖြစ်မည်။
ပထမ နှစ် ဂုဏ် ထူး တန်း နှစ်ဝက် ကျော်အထိ မေဦး နှင့် ချော ၏ ဆက်ဆံရေး သည် အခန်းဖော် နှစ် ယောက် ပုံစံ ထက် ဘာမှပိုပြီး ထူးခြားမူ မရှိခဲ့...။ ကျောင်းမှာ.. ဆက်ရှင်း ခြင်း တူပေမဲ့.. ချောက..ရန်ကုန်မှ သူ့ သူငယ်ချင်း များ နှင့် သူ့အုပ်စု နဲ့ သူ.. ။ အ၀တ်အစား..အနေ အထုိုင်.. အသံ တွေ က အစ.. တပုံစံ ထဲ..တမျိုးထဲ ရှိလှ တဲ့ အုပ်စု....။ မေဦး တို့ အဆောင်သူ အုပ်စု မှာ..နေ့စဉ် လို.. သူတို့ ကို ကြည့် ပြီး တအံ့တသြ ပြောစရာ တွေ ရနေ ပေမဲ့.. သူတို့ ကတော့..မေဦး တို့ ကို ရှိမှန်း တောင် သိချင် မှ သိမည်...။
ချော၏ ပုံစံ ကြောင့် ပဲလား တော့ မသိ.. အဆောင်မှာ လည်း ..တော်တော် များများ သည်..ချောကို တရင်းတနှီး မိတ်ဖွဲ့ ခင်မင် ဖို့.. ၀န်လေး ကြသည်။ ချော ကိုယ်တိုင် ကလည်း.. အဆောင် သာရေး နာရေး ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ ရေး တွေကို စိတ်ဝင် တစား မရှိလှ...။ စိတ်ဝင်စား ဖို့ အချိန် လဲ ရှိဟန် မတူ...။ မိုးလင်း လျှင် အစောကြီး ထကာ.. ရေသွားကူးချင် ကူး တတ်သည်။ အေရိုးဗစ် သွား ကစားချင် ကစား တတ်သည်။ ညနေ ဆို လျှင်လည်း..အဆောင်ပိတ် ချိန် နီးမှသာ ကပ်၍ ပြန်ရောက် လာ တတ်သည်။ အတန်းအားချိန် မပြော နှင့်.. အတန်း ချိန် မှန် အောင်ပင်..ကျောင်းမှာ မတွေ့ရ...။ အလကား လျှောက်သွား နေခြင်း တော့..ဟုတ်ဟန် မတူ..။ သူ့မှာက.. သင်တန်း တွေ ချည်း..။ အင်္ဂလိပ်စာ ကိုတောင် speaking နှင့် Grammar နှစ်နေရာ ခွဲ တက် သည်တဲ့..။ ပြီးတော့..ကွန်ပြူတာ ကလဲ..ဘယ် လယ်ဗယ် ကို ရောက် နေပြီး ဆိုလဲ မသိ...။ ဒါတောင် ဂျပန်စာ တက်ရ ဦး မယ် တဲ့ လေ...။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ချောသည် သူ့ အတွက် အခန်းဖော် ကောင်း တယောက် ဆိုတာ..မေဦး ငြင်း လို့ မရ...။ တခါ တလေကျ..သူ့ကို ရင်ဖွင့် တတ်သည်။
“ ချောကို..အဆောင်မှာ တော်တော် များများက..မာနကြီး တယ် ဆိုပြီး အမြင်ကပ်ကြပုံ ရတယ်နော်.. ချော..ဒီလိုပဲ နေတတ်တာ.. အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်.. ကြီးကျယ် တယ်ပဲ ပြောပြော..ချောမှာ..အချိန် မရှိဘူး..မတတ် နိင်ဘူးလေ..ဒီလိုပဲ ပေါ့.. မေဦးရော ချောကို ဘယ်လို ထင် သလဲ..မသိဘူး.. တကယ်ပြောတာပါ.. မေဦး နဲ့ နေရတာ..ချော ကံ ကောင်း တာပဲ.. မေဦးက..မစပ်စု ဘူး.. စိတ်ထား ကောင်း တယ်..ချောကို နားလည် တယ်...”
မေဦး တယောက်..လိပ်ပြာ မလုံစွာ.. အလိုက်သင့် ပြုံး နေခဲ့ ရသည်။
များသော အားဖြင့်တော့..ရိုးလ်ကောလ် ပြီး သည် နှင့်...မေဦး တို့ နှစ် ယောက် အသီးသီး..စာကြည့် စားပွဲ ထိုင် ကာ..စာကျက် ကြ သည်။ စာမေးပွဲက..နီးပြီ မဟုတ်လား..။ ဂုဏ် ထူးတန်း မို့..စာတွေ က..အရမ်းခက် လာသည်။
ကိုယ့် ကို ကိုယ် ..အတော်အသင့် တော့ စာတော်သည်ဟု ထင်ခဲ့သော မေဦး သည် ခုတလော..စိတ်ပျက် အံ့သြမူ တွေ နှင့် အတူ.. တဖြည်းဖြည်း..ယုံကြည်မူ တွေ ပျက်ပြားစ ပြု လာသည်။ အနည်း ဆုံး နှစ်မျက်နှာ ထိ ရှည်သော ရူပဗေဒ ပုစ္ဆာ များ ကုို..မေဦး တယောက် ဇောချွေး ပြန် အောင် တွက်ချက် ကျက်မှတ် နေရချိန် တွင်..ချော ကတော့..နားကျပ် ကက်ဆက် ကလေး တလုံး နှင့် တပုဒ် ပြီး တပုဒ်.. စိတ် အေး လက်အေး..တွက် နေ သည်သာ..။ ကိုယ့် ကို ကိုယ် ဒေါသ တွေ ထွက်လေ.. ပုစ္ဆာတွေက.. တွက်မရလေ..
ပိုဆိုး တာက..ကျက်စာ တွေပဲ...
အဖုံးမျိုးစုံ..အရောင် မျိုးစုံ အင်္ဂလိပ်စာ စာအုပ် များ နှင့် ပြည့်နေသော..စာကြည့် စားပွဲ မှာ..တည်ငြိမ်စွာ ထိုင်ရင်း.ခပ်ဖွဖွ..ကျက် တက်သော ချော၏ အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက် သည် အင်မတန် နားထောင် လို့ ကောင်းလှသည်။
မေဦး မှာ တော့.. တောက်တဲ့ လှည်း နင်း သလို..အသံ ထွက် ကို ဘယ်လိုမှ မထွက်ရဲ ပဲ.. နောက် ဆုံး တော့..စိတ်ထဲ ကသာ..ကျက်မှတ် ရ တော့သည်။ အဲဒီ အချိန် တွေ သည်..မေဦး အတွက် စိတ်အကျဉ်းကျပ် ဆုံး အချိန်တွေ ပင်...။ ဘာကို စိတ်တိုရမှန်း မသိပဲ..၀ဲလာတဲ့..မျက်ရည် တွေ ကိုပဲ..ဒေါသ တကြီး ပွတ်သုတ် ပြစ် မိ သည်။ ဒါပေမဲ့.. ချော ကိုယ်တိုင်က.. ချောတို့.. နောက်နှစ် ကျရင် လည်း..တခန်းထဲ နေကြမယ် နော်.. ချော မှာ..တခြား ခင်တဲ့ လူလဲ မရှိဘူး.. မေဦး နဲ့ နေရတာ..အဆင်ပြေတယ်.. ဆိုတဲ့.. စကားကို ပြောလာတဲ့ အခါ မှာ..မေဦး ဘယ်လို ခေါင်းခါ ရ မလဲ..။
ရိုးသား လှတဲ့..ချောရဲ့ မျက်လုံး တောက်တောက် လေး တွေကို မကြည့်ရဲဝံ့... အလို အလျောက် ခေါင်းညိတ် ခဲ့ ရ သည် သာ....။
ကျောင်းပိတ်ရက် တွေသည် မေဦး အတွက် စိတ်မရှည် ချင် စရာ..ငြီးငွေ့စရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ် နေသည်။
အမေ့ကို ထမင်း ဟင်း ကူ ချက်ရင်း..ချော အကြောင်း ကိုသာ..ခဏ ခဏ ပြော နေ မိသည်။ အမေ ကတော့.. ထူးပြီး စိတ်ဝင် စားပုံ မရ..
“ ကောင်းတာပေါ့ သမီးရယ်.. ပိုက်ဆံ ချမ်းသာ ပေမဲ့.. မမောက်မာပဲ..သမီး အပေါ်မှာ..ရင်းရင်း နှီး နှီး ရှိတာ..သမီး ကံကောင်း တာပေါ့.. ” တဲ့..။
အေးပေါ့လေ.. ကျောင်းက တဖက်..အိမ်မူ ကိစ္စတွေ.. မီးဖို ချောင် စရိတ် တွေ က..တဖက် နဲ့..ဆံပင်တွေ ဖြူ စ ပြု နေတဲ့..အမေ့ အတွက်..ချော အကြောင်းက..ဘာ များ..ထူးခြားမူ ရှိ မှာလဲ...။ အခု တလောဆို.. အဖေ လဲ.. အတော်ပိန် ပြီး..အသား တွေ မဲ နေသည်။ အလုပ် အကိုင်မှ အဆင်ပြေ ရဲ့ လား မသိ..။
ငါ.... တကိုယ် ကောင်း များ ဆန် လွန်း နေသလား... ခုနေ ကော..ငါ ကျောင်းပြီး သွားရင်..ဘာ အလုပ်..လုပ် ရ မလဲ.. အဖေ ကတော့..အေးအေး ဆေးဆေး နယ်မှာပဲ.. ဆရာမ လုပ်စေချင်တာ..။ အဲဒီ လို ကတော့.. ဘာလို့ ရန်ကုန်မှာ..ကျောင်းလာ တက်နေ တော့ မလဲ.. ဆယ်တန်းအောင် ကတည်းက.. လုပ်မှာ ပေါ့...
အို...ရန်ကုန်မှာ အလုပ် တွေ ပေါပါတယ်.. ငါ့ဖက် က..ကြိုးစား ဖို့ သာ လိုတာ...ငါလည်း.. ချော လို..အင်္ဂလိပ်စာ တော် အောင် လုပ်မယ်.. ကွန်ပြူတာ လဲ တက်ရမယ်.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်...ဒီ အထိ တောင် ခရီးပေါက် လာမှ..ငါ.. အားလျှော့ လို့ မဖြစ်ဘူး.. ကျောင်း လေး ရယ်.. အမြန် ပြီးပါတော့....
ခုတလော.. အားရင်.. တနေရာမှာ ထိုင် ကာ..အင်္ဂလိပ်စာ အုပ် တွေကို ကြိုးစားပမ်းစား လေ့လာ နေသော မေဦး ကို..မောင်လေး တွေက.. အမြင်ကပ်စ ပြု လာသည်..။ အခါ တိုင်း လို့..သူ တို့ နှုင့်...နောက်လိုက် ပြောင် လိုက် မလုပ် တော့ သော..မေဦး သည် အထူး အဆန်း ကြီး ဖြစ်နေ သည်။
ဇူလိုင်လ ၏ မပြတ်စွေ နေသော ရန်ကုန် မိုး နဲ့ အတူ.. မေဦး တို့ ကျောင်းတွေ ဖွင့် ခဲ့ ပြန်သည်။
မပြောင်းလဲ သော ချော၏ ပုံစံ ကတော့..သစ်လွင် လှပမြဲ....ပြီးတော့... အရာရာ ကို..အကောင်းမြင်ကာ.. ပျော်ရွှင် နေမြဲပင်..။ မေဦး အနေ နှင့် လည်း.. မပြောင်းလဲ သော သူတို့ နှစ်ယောက် ၏ ခင်မင်မူ ကို နားလည် လက်ခံ လာ နိုင် ခဲ့ သည်။ ဒါပေမဲ့..ဒုတိယ နှစ် ၏ စာမေးပွဲ များ ဖြေဆိုရန်.. တလ ခန့် လို မှာပင်.. ချော.. အဆောင်မှ ထွက် သွား တော့ သည်။ သူ့ အဖေ..ရာထူး တိုးကာ..မိသားစု ရန်ကုန်ကို ပြောင်းရွှေ့ လာ သည် တဲ့...။
ချော..အဆောင်မှ မထွက်ခင်..ညက.. ပစ္စည်းတွေ သိမ်းရင်း...တညလုံး.. စကားတွေ ပြော ဖြစ် ခဲ့ ကြသည်။
“ ချောလေ.. မိသားစု နဲ့ နေရမယ် ဆို တော့..ပျော် တော့ ပျော်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့.. အဆောင်မှာ လွတ် လွတ် လပ်လပ် တယောက်ထဲ နေရတာ လေး ကိုလဲ..သဘော ကျတယ်... ဒီ နှစ်တော့..ပြီးအောင် နေပါရ စေ ဆို တာ..မာမီက..ပြောလို့ မရ
ဘူး.. မေဦး အတွက် ရော..အခန်းဖော် အပြောင်း အလဲ ဆို တော့..အဆင်ပြေ ပါ့ မလား.. ချော တော့..မေဦး ကို တကယ် သတိရ နေမှာပဲ.. မေဦး ရည်မှန်းချက် ကြီး တာ..ချော သိပါတယ်..ကျောင်းပြီးရင်..ရန်ကုန်မှာ တက်လမ်းတွေ အများကြီး.. ချော လဲ တတ်နိုင် သလောက်.. ကူညီမယ်.. ပြီးတော့..ချော..မေဦး ကို လက်ဆောင် တခု ပေးမလို့.. မေဦး မငြင်း ရ ဘူးနော်...”
ပြောပြောဆိုဆို.. သူ့လက်မှာ ပတ်ထား သော ရွှေရောင် နာရီလေး ကို ချွတ်ကာ မေဦး လက်မှာ အတင်း ပတ် ပေး တော့သည်။ မေဦး အသဲ အသန် အကြောက် အကန် ငြင်းဆန် ပေမဲ့.. နောက်ဆုံးတော့.. ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင် ပဲ..လက်ခံ လိုက် ရသည်။
“ မေဦး ဘ၀မှာ.. တန်ဖိုးရှိ တဲ့.. အကျိုးရှိတဲ့.. အချိန် တွေ ကို..ဖန်ဆင်း နိုင် စေ တော့ လို့..ဆုတောင်း ပေး လိုက် မယ်နော်.. ” တဲ့လေ...။
သူ့ လက်ကောက်ဝတ် ပေါ်မှာ ရောက်ရှိ လာတဲ့.. အကောင်းစား နာရီ ၀ိုင်းဝိုင်း လေး ကို စိတ်မသန့် စွာ ကြည့်ရင်း.. ခဏခဏ စက် ရပ် တတ်သော သူ့ နာရီ ကြောင့် သနား ၍ ပေးခြင်းလေ.. နာရီ တွေ အမျိုးစုံ အောင် ပိုင်ဆိုင် ၍ တန်ဖိုး မထားပဲ ပေးခြင်းလော
.. တကယ်ပင် ခင်မင်မူ သံယောဇဉ် နှင့် အမှတ်တရ ပေးခြင်းလော.. မေဦး တယောက် မ ဝေခွဲ နိုင် အောင် ရှိခဲ့သည်။ သေချာ တာကတော့.. သူ့ အပေါ်မှာ.. ချော..အမြဲတမ်း ရိုးသား ခဲ့ တယ် ဆိုတာကို.. လက်မခံ ချင်ပေမဲ့.. ခံစား နားလည် နေ ခဲ့ ရသည်။
အချိန်တွေသည် သူ့ ထက်ငါ အလု အယက်များ တိုးဝှေ့ သွားေ
နကြ သလား မသိ.. တဖြည်းဖြည်း နှင့် နီးကပ် လို့ လာချေသည်။ မေဦး ပြီးချင်လှ ပါတယ် ဆို တဲ့ ကျောင်းကြီး ပြီး တော့မယ်လေ....ဒါပေမဲ့လည်း .. စိတ်ထဲ မှာ..ဘာကို ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ် နေ မှန်း မသိ...
မေဦး ၏ လေထဲမှ ဆောက်လက်စ တိုက်အိမ် ကြီး သည် လည်း..သဘ၀ မကျစွာပင်.. ကသောင်း ကနင်း ဖြစ် လို့ နေသည်။ နောက်ဆုံး နှစ် မို့.. အဆင့်ကောင်းကောင်း နှင့် အောင်- အောင် စာတွေ ကို အသဲအသန် ကြိုးစား နေ ရ ပေမဲ့.. စိတ် ထဲ မှာ..အမှား
ကြီး တရပ်ကို..ကျူးလွန် နေ မိသ လို.. ထူးထူး ဆန်းဆန်း ကြီး ခံစား နေရ သည်။
အခု နှစ် ထဲမှာ..အဖေ လဲ ပင်စင် ယူပြီး ကာမှ.. ကျန်းမာရေး အရမ်း ညံ့ နေတာကို..သတိရ မိသည်။ တခုခု သာဆို..အမေ ကလဲ..အိုးတိုး အတ နဲ့..။ မောင်လေး တို့ တော့ ရှိသား... ခုနှစ် ဆယ်တန်း အောင် သော အကြီးကောင် ကတော့.. အဝေးသင်ပဲ တက်မယ် တဲ့... အလုပ် ထွက်လုပ် မယ် တဲ့... ငါသာပဲ..
အို... ငါ...ဘာဖြစ် လို့ လဲ.. တက္ကသိုလ် တက်တာ..ဘာ မှား လို့ လဲ... ခု..ကျောင်းပြီး တာနဲ့..ရန်ကုန်မှာ..အလုပ် မရ-ရ အောင် ရှာမယ်.. အဖေ ကတော့..ပြောသား....
“ နေရာ ကျ လိုက်တာ.. ခု..မြို့ နယ် ပညာရေးမှူး က..အဖေ နဲ့ တော်တော် ခင်တယ်ကွ.. မူလတန်းပြ ရာထူး တွေက..သူ့ လက်ထဲမှာ.. ဟိုး တနေ့က ပြောတယ်... ခင်ဗျား သမီး က..ဘွဲ့ရ ဆို ရင် တော့.. မြို့ နဲ့ နီးနီး တော့..ရ ရမှာ ပေါ့ လို့..ပြောတာပဲ... ”
ခက်တာက.. ငါ..အဲဒီ အလုပ် ကို မလုပ်ချင်ဘူး... ကုန်- ကုန် ပြောရ ရင်.. နယ် မှာကို မနေ ချင်တာ.. ဒါပေမဲ့.. အခြေအနေတွေ.. ပြီးေ
တာ့.. အချိန်တွေ.. အင်အား တွေ..ငွေတွေ..ငါ့မှာ..ဘာတခု မှ မရှိ ပါလား...
သက်ပြင်း မော နှင့် အတူ.. မ၀ံ့ မရဲ မျှော်လင့်ချက် မ
ျား သည် ၊ တင်းထား သော.. စိတ် ထဲမှ..လွင့်စင် ထွက်ပြေး သွား ကြ သည်။ သူ့ အာရုံ ထဲ တွင်...အဖေ နဲ့ အမေရဲ့ နွမ်းလျ နေတဲ့..အသွင် အပြင်တွေ.. မရေရာ တဲ့ အနာဂါတ် အတွက်.. အရာရာ ကို လက်ခံ နိုင် အောင် ကြိုးစားနေတဲ့..အကြီး ကောင်..၊ အရွယ် နဲ့ မလိုက် အောင် နားလည် လိမ္မာတဲ့.. အငယ်ကောင် တို့ ရဲ့ အပြစ် ကင်း သော မျက်နှာ တွေ သည် ဝေ့၀ါး ထပ်ဟပ် လာသည်။
ဦးဏှောက် ထဲ မှာ တော့.. မဟာ သိပ္ဗံ ဘွဲ့ အတွက်
ကုန်ကျ နိုင်မဲ့.. ငွေပမာဏများ..ရန်ကုန်မြို့ ကြီးမှာ..လူ တယောက် ရုန်းကန် ရပ်တည် ရမဲ့.. နေစရိတ်..စားစရိတ်များ... တက်ချင် လှ ပါ သည် ဆို သော ကွန်ပြူတာ သင်တန်းများ အတွက်..ကျသင့် သည့် သင်တန်းကြေးများ သည်..ထွက်ပေါက် မ ရ အောင် ပြည့်ကျပ် နေ သည်။
ကံ- ကံ၏ အကျိုးပေး ဆို သော စကား ကို တစိမ့်စိမ့် တွေးရင်း.. နာကျင်စွာ နားလည် နေ မိသည်။ ပြီး တော့..ချောအိ နွယ် ဆို သော..ကောင်မလေး ၏ ကံ အကျိုးပေး အကြောင်း..
နောက်ဆုံး နှစ် မှာ ဆက်ရှင်း ခြင်း မတူ ကြ တော့ သည့် အတွက်..ချော နှင့် သူ ပို၍ အနေ ဝေး သွား ကြသည်။ တကယ့် တကယ်..မေဦး က ဝေးခဲ့ တာပါလေ..။ သူ့ကို တွေ့ တိုင်း..၀မ်းသာ အယ်လဲ နှုတ်ဆက် တတ်သော.. ချောကို.. ပုံစံ တူ အေ
ပါင်းအသင်း များ နှင့် မကြာခဏ တွေ့ တိုင်း.. မေဦး တယောက် ဘာ ကြောင့် မှန်း မသိ..မမြင်ယောင် ဆောင် ကာ..ရှောင် နေ ခဲ့ သည် မဟုတ်လား...။
ချောလည်း တတ်နိုင် သလောက် ကူညီ မယ် ဆိုတဲ့ ချောကို.. သူ..ဘယ်လို အကူအညီ မျိုး တွေ..တောင်းရ မလဲ....
ရန်ကုန် ဘူတာကြီး တခုလုံး.. လူတွေ နှင့် ပြည့် ကျပ် ရှုပ်ထွေးကာ ဆူညံ နေသည်။
အထုတ် တွေ မနိုင် မနင်း နှင့်...အမှတ် (၁) စင်္ကြန် ကို ရှာနေသော..မေဦး တယောက်.. သူ့ နာမည် ခေါ် လိုက်သံ ကြောင့်...ရုတ်တရက်.. ရပ်တန့်ကာ နောက်လှည့် ကြည့် မိသည်။
“ ဟယ်..ချောရယ်.. ကြည့်စမ်း..”
ရုတ်ချည်း ဆိုသလို ၀မ်းသာ ပျော်ရွှင် သွားပြီး မှ..ဘယ်က ဘယ်လို ၀မ်းနည်း အားငယ်မူ တွေက..အဓိပ္ဗါယ်မဲ့စွာ ၀င်ရောက် လာ သည် မသိ..။
“မေဦး...အိမ်ပြန် တာလား.. ဖြေနိုင် တယ် မဟုတ်လား.. စာမေးပွဲ နောက်ဆုံး ရက်က.. မေဦးကို..တို့ လှမ်းခေါ် သေးတယ်.. မကြားဘူး..
ခု ကြည့်စမ်း.. ကံကောင်းလို့ ဆုံတာ..ရုံးက..မိတ်ဆွေ တွေ မန္တလေး ဆင်းလို့ လိုက်ပို့ တာလေ...”
ပြန်ပြောစရာ စကား ရှာ နေရင်း.. မေဦး ပါးစပ်က.. ဘာတွေ ထွက်သွား မှန်း တောင် မသိ...
“ ချော..ဆက် တက်မယ်..မဟုတ်လား...”
“ ချော တော့.. တော်ပြီကွာ.. မတတ်နိုင် တော့ ဘူး.. ထုံးစံ အတိုင်း အချိန် တွေ တအား နည်း နေတယ်.. ခုတောင်..အလုပ်ဝင် လုပ်ဖြစ်တာ.. MD က ဦးလေး မို့ လို့.. အလကားနေ..အလား ..အတင်း ပဲ လုပ် ဆိုလို့..ယာယီပါပဲ.. ခု..ချော..အမေရိက
ကို လိုက်ဖို့.. လုပ်နေတာ..
ဒါနဲ့..မေဦးကော ဆက်တက်မယ် မဟုတ်လား..”
“ ဟို.. အင်း... ခု..မေဦး တို့ အဖေက..ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်း ဘူးလေ.. အဲဒါ ပြန်တာ..”
ဝေ့တေ့ ၀ါးတား နိုင် လှ သော မေဦး အဖြေသည် အရှိတရား ကို ဘာလို့ များ မဖော်ပြ နိုင် ရ တာလဲ...
“ အို... စိတ်မကောင်း စရာ ပဲ ကွာ.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..
မေဦး ဆက် တက်ဖြစ် အောင် တ က်ကွာ. အကူအညီ လိုရင်.. အချိန် မရွေးပဲ..ရော့..ဒါ..ချောရဲ့.. visiting card ..ရုံးဖုံးရော..အိမ်ဖုံးရော..အကုန် ပါတယ်.. တကယ် ဆက်တက်ဖြစ် အောင် တက်နော်.. စကား ပြောရတာတောင် မ၀ဘူး..စောင့်နေကြမှာ စိုးလို့.. သွားမယ်နော်...”
လှပ သွက်လက်စွာ ထွက်ခွါ သွား သော ချော
၏ ကျောပြင် ကို ကြည့်ရင်း.. တခါတုန်းက အခန်းဖော် အဖြစ် စတွေ့ ခဲ့ရသော...ချောအိနွယ် ဆိုသော ကောင်မလေး ရဲ့ ငှက်ငယ်မလေး လို မြူးတူး ဖျက်လတ် နေတဲ့ အသွင် ကို မြင်ယောင် လာသည်...။
သြော်..ချောရယ်..စိတ်မကောင်း စရာပဲ တဲ့လား... အချို တွေ ကိုပဲ..စားသုံး နေတဲ့ လူ ဟာ.. ခါးတယ် ဆိုတာ.. မချိုတာပဲ ဆိုတာထက်..ဘယ်လောက်များ ပိုသိ နိုင် မလဲ နော်...
ဘူတာရုံ မှ.. ၁၂ နာရီ ထိုးကြောင်း အချက်ပေး သံ နှင့် အတူ...မေဦး တယောက် အမှတ် (၇) အစုန် အမြန်ရထား ကြီး ကို စီးးရန်..လူတွေ ထဲ မှာ တိုးဝင် ပျောက်ကွယ် သွား တော့သည်။
ရထားပြတင်း မှ တဆင့်... မြို့ပြ ရဲ့ အသွင် သဏ္ဌန် တို့သည် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ် သွားကြသည်။ အားလုံး ကျန်ရစ် ခဲ့ ကြပြီ..။
ဆုံးစ မထင်သော လယ်ကွင်း များပေါ်ဍ် ဆည်းဆာရောင် ပါးပါး ပင် ကျစ ပြုလာ နေပြီ.. ။ လက်က ရွှေရောင် နာရီ ၀ိုင်းဝိုင်း လေး ကို ကြည့်တော့.. (၆) နာရီ တောင် ထိုး တော့မယ်...။
ချောရယ်... လောကကြီးမှာ..တန်ဖိုးရှိ တဲ့ အချိန်ေ
တွကို မေဦး ဖန်ဆင်း ရ တော့မယ်လေ... ဒါပေမဲ့.. ဘယ် လောက် အတိုင်း အတာ အထိ မေဦး အတွက် အကျိုး ရှိ မလဲ ဆို တာ ကိုတော့.. မစဉ်းစား တော့ပါဘူး..
ခုလောက်ဆို.. အဖေ တို့ တွေ တော့..ဘူတာရုံမှာ
..လာကြို နေကြ မည် ထင်သည်။ အဖေ ကတော့..ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးက.. ကျောင်းပြီး လာတဲ့..သူ့ သမီး အတွက်.. ဂုဏ်တွေ ယူကာ..ပျော်ရွှင် နေ မှာပင်..
တအား ရှိုက် လိုက်သော.. ပင့်သက် ၏ အဆုံးမှာ..အပြီးတိုင် ထွက်ခွါ သွားသော သက်ပြင်းရှည် တခု သည် ရထားပြတင်း မှ ၀င်ရောက်လာသော လေ နှင့် အတူ.. ရောနှော ပျောက် ကွယ် သွားတော့သည်။ ။
(၁၉ ၉ ၄)
မပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀တွေက ခြေထောက် မသန်တဲ့ အထဲ တာထွက် နောက်ကျ သလိုပါပဲ။ အသေအကြေ တော်တော်လေး ရုန်းကန်နိုင်မှ ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်တာမျိုးပါ။
အရမ်း ခံစားရတယ် မကေရေ။
မကေရဲ့ ၀ထ္ထုလေးက ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ လောကမှာ လူအမျိုးမျိုး တွေ့ရ မြင်ရတာပဲနော်။ ဘ၀အခြေအနေ အဆင်းအတန်းတွေလည်း စုံလို့ပေ့ါ။ ဒီဝထ္ထုလေး ဖတ်ရင်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘ၀ အဆောင်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စာတူတူကျက်ရင်း နေခဲ့ရာတွေကို ပြန်သတိရသွားတယ်။
character တွေဖော်ထားတာ၊ နေရာချထားတာ သိပ်ကြိုက်တယ်။ နောက်ကျပြီးမှ လာဖတ်မိလို့ တနေ့တည်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။
မြနှောင်းညို ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို သတိရမိတယ်။ တူတော့ မတူပါဘူး။ သိပ်ကြိုက်ဖူးတဲ့ ဝတ္ထုမို့ သတိရလိုက်တာ။
မကေရေ...သဘောကျလိုက်တာ၊ တခါတည်း မျောပါသွားခဲ့တယ်၊ အဲဒီလို သဘာဝကျကျ ဇာတ်ရုပ်လေးတွေ အသက်သွင်းတတ်ချင်တယ်....
Wow I love "သံတူကြောင်းကွဲ" post ... =D
Currently, feelings of May Oo are same like me ^^
ကိုယ်တိုင် အပြစ်လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါပဲ ပြစ်ဒဏ်ခံသလို ခံနေရတဲ့ ဘဝတခုကို ရေးပြတာ အလွန် သရုပ်ပေါ်လှပါပေတယ်ဗျာ...
တချို့ကတော့ ၁၀၀ ပြည့်ဖို့ ၉၉ က စ ရတယ်...
ငါတို့တော့..တစ် ကပဲစ ချည့်နေရလို့..အသက်ပဲ၁၀၀
ချောက မေဦးကို ရွှေရောင်နာရီလေး လက်ကချွတ်မပေးပဲ ဗူးလေးနဲ့ နာရီအသစ်လေးပေးခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲလို့..စဉ်းစားနေမိပါတယ်.မေဦးသာ ကျနော့်ညီမလေးဆိုရင် ပြန်ပေးခိုင်းမှာပဲ.တကယ်ပေးချင်တယ်ဆို အသစ်ပေးပေါ့လေ. မေဦးတို့မှာက အတင်းကိုရုန်းကန်နေရတာ သိက္ခာက လွဲလို့ ဘာရယ်မှ မရှိနိုင်တဲ့ ဘ၀ရယ်..သိပ်တိုးတက်ချင်တဲ့ကောင်မလေးဘ၀ရယ်.အဲ့ဒီဘ၀အတွက် အရမ်းကိုပေးဆပ်နေရတဲ့ မိသားစုဘ၀ရယ်ကို ကိုယ်ချင်းစာနာပြီးဖတ်သွားပါတယ်..(ဟဲဟဲ..ခုတော့ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကိုပဲ တက်နိုင်အောင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေက လုပ်ပေးနေတယ်လေ အဆောင်သွားနေစရာလဲမလိုတော့ဘူး..)
မေဦးနဲ့ ဘ၀တူ ဆရာ၊ ဆရာမ သားသမီးတွေပါ ကေ ရေ..ထပ်တူ ခံစား နားလည်မိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘ၀အကျိုးပေးချင်း မတူတဲ့ ဘ၀တွေကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေဘဲ ရတဲ့ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အကျိုးရှိအောင် နေဖို့ပါပဲ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံတယ် မပြည့်စုံတယ် ထက် စိတ်နေစိတ်ထား ပြည့်စုံ ချမ်းသာဖို့ ဘ၀မှာ ပိုအရေးကြီးတယ် မြင်မိတယ်။
၀တ္ထုကောင်းလေး ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။
မကေရေ လာဖတ်သွားပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံး ပြီးမှ တခါတည်း ဖတ်သွားတယ်။ အရင်ပို့စ်တုန်းက အဆုံးကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မပြီးသေးဘူးဆိုတာ သိလို့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခြေအနေမတူတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀တွေကို နှိုင်းယှဉ်သရုပ်ဖေါ်ထားတာ သိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
မေဦးကလည်း အားငယ်တတ်လိုက်တာနော်။ ဝန်ထမ်းသားသမီးတော်တော်များများ ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့ရတာ ချည်းပါပဲ။ ချောလို အပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့တော့လဲ အေးအေးဆေးဆေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ခင်ပလိုက်ပေါ့။ နာရီ ပေးတာကို ဒီလိုပြန်ပြောရင် မကောင်းဘူးလား။ "ခင်တယ်လည်းဆိုသေး ပတ်ပြီးသားကြီး ပေးတယ်တေါ့" ပေါ့...ဆိုပီး ဟာသလုပ်ပြစ်လိုက်ပေါ့လို့။
အဲ ကိုယ့်ဘဝ အတွက်တော့ ဘယ်လိုအနေအထားဖြစ်ဖြစ် ဖောက်ထွက်ပစ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးထားရမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ အားမရလိုက်တာ မေဦးရယ်။ :)
ကေ့ဝတ္ထုဖတ်ပြီး ဘာဆက်ပြောရမယ်တောင် မသိတော့ဘူး.. ကြိုးစားရတာတော့ ကြိုးစားခဲ့ကြရတာပဲလေ.. ဒါပေမယ့် တချို့က ကြိုးစားသလောက် ပေါက်မြောက်ခဲ့ကြတယ်.. တချို့ကတော့.....
I like the one.
real life .....
we can see in actual life.
အပြင်မှာ တကယ်က အဲလိုမျိုးပိုများတယ်နော်။
နယ်မြို့လေးမှာက ကျောင်းဆရာ/ ဝန်ထမ်းသားသမီးတွေ အများအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတာ.....
ညီမတို့အစ်မတွေ ခေတ်ကနေပြီး ညီမတို့ ခေတ်အထိပါပဲ။
ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကျောင်းမှာသူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်နှစ်ယောက်က သူဌေးသမီးတွေ၊ ကိုယ်က ဝန်ထမ်းသားသမီး၊ သုံးနိုင်ဖြုန်းနိုင်တာချင်း ကွာပေမယ့် စိတ်ထဲ မေဦးလိုမဖြစ်မိဘူး။ :)
မကေပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အဆောင်မှာ တူတူနေခဲ့ရတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ကို သတိရမိတယ်။
မကေတို့မြို့ကပဲ၊ မိဘအလုပ်ရော၊ နံမည်ရော အကုန်တူတယ်။ ဘဝရည်မှန်းချက်ကြီးတာရော၊ စာကြိုးစားတာ၊ အားငယ်တတ်တာ အားလုံးတူတယ်။
ကျောင်းပဲမတူတာ၊ ပြီးတော့ မကေဒီစာရေးတဲ့အချိန်မှာ သူက အလယ်တန်းကျောင်းသူလောက်ပဲ ရှိဦးမယ် :)
Shwedarling ကနေ ပထမဦးဆုံအကြိမ်ရောက်လာတာပါ မကေရေ.
ဖတ်စရာများသော နေ့စဉ် အွန်လိုင်းကမ္ဘာကြီးထဲမှ.. တကူးတက.. ဖတ်ပေးကြသော..မိတ်ဆွေ ဟောင်း များ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ မိတ်ဆွေ သစ် တွေ ဖြစ်တဲ့..ဒဏ္ဍာရီ ..မန်းလေရူး.. မိုင်းဒ်.. နဲ့ မ၀ါ ခိုင်မင်း တို့ကိုလည်း..ဒီနေရာကနေ.. နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ လက်တလော..နေရာ အပြောင်းအရွှေ့ ကြောင့် အင်တာနက် သိပ်မသုံးနိုင်နေလို့.. အားလုံးဆီ အရောက်မလာ နိုင်သေးတာ...ခွင့်လွှတ်ပါ..။ အားလုံးကို ခင်မင်စွာဖြင့်..း)